''အတူတူကြိုးစားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်က ရတယ်ဆိုတော့ မရခဲ့တဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေအတွက် စိတ? - Yangon Media Group
”အတူတူကြိုးစားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်က ရတယ်ဆိုတော့ မရခဲ့တဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေအတွက် စိတ?
”မုန်းစွဲ”ဇာတ်ကားဖြင့် အကယ်ဒမီဆုကို ပထမ ဆုံးရရှိခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာသြရသနှင့် တွေ့ဆုံမေး မြန်းခြင်း..။
မေး-”မုန်းစွဲ”ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆုကို ပထမ ဆုံးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေး ပြော ပြပေးပါဦး။
ဖြေ-ကျွန်တော်”မုန်းစွဲ”ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာ လည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုဆု ရတာကြောင့်လည်း အရမ်းကိုကျေနပ်တယ်။ အဓိက ကတော့ ဒီ ဇာတ်ကားကြီးကို အားပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ် တွေကိုလည်း အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး-ဇာတ်ကားရိုက်နေတုန်းမှာရော ဆုတစ်ခုခုရ မယ်လို့ထင်ခဲ့လား။
ဖြေ-”မုန်းစွဲ”ဇာတ်ကားကတော့ စိတ်တိုင်းကျ စိတ် အကျေနပ်ဆုံး ပုံဖော်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို စိတ်တိုင်းကျပုံဖော်ခွင့်ပေး တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဇာတ် ကားကိုစရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဆုတစ်ခုခု ရကိုရရ မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်ရုံတင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် တို့မျှော်မှန်းထားတာထက် အများကြီးကို ပိုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေက အားပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ-အခက်အခဲတွေကတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရမ်း ကြီးကြီးမားမား အဆင်မပြေလောက်အောင်အထိ ရှိတဲ့ အခက်အခဲမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှန်ကြုံတွေ့ နေကျ အခက်အခဲတွေလောက်ပဲရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာက ၁၉၅ဝ လောက်အချိန်က ဇာတ်ကိုရိုက်တာဆိုတော့ ရိုက်ကွင်းနေရာတွေကို တော့ တော်တော်လေး အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သွားရိုက်တဲ့ ယောဒေသက ဒေသခံ တွေကလည်း အများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
မေး-”မုန်းစွဲ”ဇာတ်ကားမှာ ဆုမရခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း အပါအဝင် အခြားသူတွေကို ဘယ်လိုပြောချင်လဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ စိတ်ဓာတ်မကျ ပါနဲ့။ တစ်ချိန်ကျရင်တော့ သေချာပေါက်ရမှာပါ။ ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ ”မုန်းစွဲ”ထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် တွေကလည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ကောင်းဖို့အ တွက် သရုပ်ဆောင်တွေချည်းပဲကောင်းနေလို့လည်း မရပါဘူး။ အားလုံးက ညီညီညာညာကောင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုအားလုံးအတူတူကြိုးစားခဲ့လို့ လည်း ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားဆုတွေရတယ်။ ဒါပေ မဲ့ အတူတူကြိုးစားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်က ရတယ်ဆို တော့ မရခဲ့တဲ့အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး-အကယ်ဒမီပွဲအပြီး ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ-အကယ်ဒမီပွဲအပြီး ဝေဖန်တာများတယ်ဆိုတာ ကလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ကျေနပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို မကျေနပ်ကြတဲ့သူ တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုဖြစ် နေတာတွေကိုပဲ အကယ်ဒမီလို့မြင်ပါတယ်။ ပရိသတ် တွေဘက်ကလည်း နားလည်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်တဲ့၊ အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်ကို ရစေချင်ကြတာပဲဖြစ် ပါတယ်။